Ny zava-drehetra momba an'i Nolvadex
1.What is Nolvadex? Ahoana no iasany? 2. Mampiasa i Nolvadex
3.Nolvadex dosage Valiny 4.Nolvadex
5.Nolvadex ny antsasaky ny fiainana 6.Nolvadex side-effects
7.Nolvadex 8.Nolvadex fanamarihana
9.Nolvadex for sale 10.Nolvadex hitandrina ny fahalemen'ny vehivavy
1. Inona no atao hoe Nolvadex? Ahoana no iasany?
Amin'izao fotoana izao, ny homamiadan'ny nono dia iray amin'ireo aretina mahazo ny vehivavy mijaly. Betsaka ny fikarohana natao ary mbola atao amin'ny zava-mahadomelina izay afaka manampy amin'ny fananana fiainana tsy misy homamiadana. Nolvadex (54965-24-1) dia iray amin'ireo fitsaboana izay nanaporofo fa mahasoa amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny homamiadana. Ankoatr'izany, ny fahabangany dia manome azy toerana iray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Nolvadex (54965-24-1) dia pilina am-bava izay nahomby tamin'ny fitsaboana ny marary izay efa voan'ny kanseran'ny haavo. Hita tao amin'ny 1966 izy io, ary nanomboka ny fianarana ho fitsaboana homamiadana amin'ny 1970. Ao amin'ny 1998, nanjary zava-mahadomelina voalohany ny fahazoana fankatoavana avy amin'ny FDA mba hisorohana ny homamiadana. Ny fikarohana natao dia naneho fa ny Nolvadex dia nampihena ny sakana amin'ny fijalian'ny kanseran'ny nono amin'ny 50% ho an'ny vehivavy izay mety hampidi-doza azy io.
Mba hahafantarana ny fomba fiasan'ny Nolvadex, tokony ho fantatrao fa ny sela voan'ny kanseran'ny nono dia mitaky hormone vehivavy fantatra amin'ny hoe estrogen mba hitombo sy hihabetsaka. Noho izany, ny tamoxifen dia afaka manilikilika izany amin'ny alàlan'ny fifandonana amin'ny estrogen amin'ny fifandraisana amin'ny estrogen receptors ao amin'ny sela voan'ny kanseran'ny nono.
Ny Nolvadex (54965-24-1) dia lazaina amin'ny fomba ofisialy ho modilatera mpanome safidy estrogen (SERM). Noho izany, dia mampihena ny fivoarana sy ny fananganana sela avy amin'ny sela avy amin'ny fanakanana estrogen ao amin'ny nono.
Ankoatra ny Nolvadex miady amin'ny estrogen ao amin'ny sela kanseran'ny nono dia manaparitaka ihany koa ny vokatra tsara izay mahatonga ny estrogen ao amin'ny vatana. Ho an'ny vehivavy menavava amin'ny tamoxifen, mety hampihena ny mety ho aretin'ny fo sy ny osteoporose (toe-javatra miteraka izany ho an'ny fandrosoana ny taolana) raha tsy misy ny fanoloana fitsaboana hormonina.
2. Mampiasa i Nolvadex
Nolvadex dia efa nampiasaina nandritra ny taonjato maro teo amin'ny fitsaboana ny fepetra samihafa. Izy io dia tonga mpamonjy amin'ny ankamaroan'ny lehilahy sy vehivavy mijaly noho ny aretina toy izay, fara fahakeliny indray mandeha amin'ny fiainany. Ireto ny sasany amin'ireo Mampiasa i Nolvadex izay efa nahatanty izao;
Ny Nolvadexmay dia natao ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fitsaboana ny lymph node positive na ny lymph node-kanseran'ny nono rehefa avy nandany fandidiana mahomby. Ny fampiasana ny Nolvadex dia hita fa mahasoa kokoa rehefa mifandray amin'ny homamiadana manana estrogen positive sy progesterone receptors. Nolvadex Mampihena ny mety ho voan'ny homamiadan'ny kanseran'ny nono.
Ny lehilahy sy ny vehivavy manana homamiadana metastaty (homamiadana efa niparitaka) dia azo aseho amin'ny Nolvadex.
Ireo Vehivavy mijaly amin'ny karazana kanserôma ao an-toerana (DCIS) sy izay efa nodidiana fandidiana sy fitsaboana aretin-koditra dia mety hahazo tombony amin'ity zava-mahadomelina ity koa. Amin'ity tranga ity, ny Nolvadexmay dia mampihena ny mety ho voan'ny kanseran'ny nono. Ny risika sy ny tombony amin'ny fananana io fitsaboana io dia tokony horesahina mialoha.
Ireo vehivavy izay atahorana ho voan'ny kanseran'ny nono dia azo lazaina ihany koa amin'ny fampidirana ny zava-mahadomelina mba hanohitra ny mety hisian'ny izany. Ny loza sy ny tombontsoa azon'io fitsaboana io anefa dia tokony hodinihina amin'ity tranga ity.
I Nolvadex no mahazatra ny fitsaboana ny homamiadan'ny oviana.
Ny dosie Nolvadex dia tsy voatery ho tena avo lenta mba hiasa; Serment SERM izay miasa tsara amin'ny dosia ambany. Ho an'ny fitsaboana, ny karazana Nolvadex dosage dia 10-20mg, izay omena indroa isan'andro.
Ho an'ny vokatra anti-estrogenic sy pro-testosterone, ny dosie Nolvadex dia tokony eo anelanelan'ny 10-40mg isan'andro. Ny dosage izay nofidianao dia miankina amin'ny habetsanao, ny tanjonao, ary ny habetsahanao ny fotoana tianao hipetraka eo.
Tsara ny manamarika fa tsy misy vokany tsara kokoa ny dosie Nolvadex ambony. Ny mg 10-40 dia hanome anao ny fiantraikany manan-danja sy haingana izay ilainao amin'ny fampihenana ny voka-dratsy ateraky ny fitsaboana anabolic steroids.
Tsy misy fiheverana manokana momba ny fitantanana ny Nolvadex. Safidinao ny handray izany na alohan'ny, aorian'ny, na mandritra ny sakafo. Azonao atao ihany koa ny misakafo maraina na mandritra ny alina. Indraindray dia omena torohevitra ianao fa tsy tokony hizara ny dosage Nolvadex.
4. Ny valin'ny Nolvadex
Ny Nolvadex dia vokatry ny fisorohana ny homamiadana dia ny sasany amin'ny tsara indrindra raha oharina amin'ny zava-mahadomelina hafa. Ny vokatra dia mampiseho ny fihenan'ny 50% amin'ny vehivavy izay voan'ny kanseran'ny nono sy ny tsy manan-kery. Ny fakana azy mandritra ny dimy ka hatramin'ny folo taona dia nanaporofo ny fihenan'ny homamiadana sy ny mety ho fisian'ny tratra hafa.
Ny Nolvadex koa dia mahatonga azy io ho vahaolana tena tsara amin'ny fitsaboana ny gynecomastia na ho fanafody fisorohana ary koa ny fitsaboana mialoha ny fampiroboroboana azy io. Tao anatin'ny fandalinana tsotsotra natao tamin'ny marary folo tao anatin'ny iray volana, fito tamin'ireo no nihena ny haben'ny tratrany. Ny efatra tamin'izy ireo dia nahitana fanamaivanana kely. Tsy nisy fanodinkodinana notaterina.
Manolotra vokatra tsara koa izy amin'ny fanentanana ny famokarana Testosterone satria voalaza fa niverina tamin'ny ara-dalàna izy rehefa afaka herinandro.
5. Ny antsasak'i Nolvadex
The Ny antsasak'i Nolvadex dia ela be raha oharina amin'ny vondrona hafa. Dimy ambiny dimy na fito andro izy io miaraka amin'ny fikarohana sasany mampiseho fa ny antsasaky ny fiainana Nolvadex dia afaka mandeha 14 andro.
6. Ny voka-dratsin'ny Nolvadex
Ny Nolvadex dia zava-mahadomelina izay nampahafantarina maherin'ny dimampolo taona lasa izay, ary mahagaga fa ny ampahany aminy dia efa nodinihina tsara. Manana tombony maro izy io, saingy misy ihany koa Ny vokatry ny Nolvadex izay mety hanorisory anao. Tsy midika anefa izany fa raha vao manomboka ianao, dia tsy maintsy mandalo ny vokatry ny Nolvadex. Ny ankamaroan'ny fotoana dia mety tsy hijaly na oviana na oviana amin'ny iray amin'izy ireo ianao.
Matetika ny voka-dratsin'ny Nolvadex dia azo fantarina amin'ny resaka momba azy ireo sy ny fotoana haharetanao azy ireo. Ilaina ihany koa ny manamarika fa ny vokany dia miova foana ary mandeha foana rehefa vita ny fitsaboana.
Raha vao mihaino ny vatanao ianao, dia ho hitanao fa mety henjana ny fiantraikany eo amin'ny toe-javatra sasany, ary mety hampihenana na hisakana azy ireo amin'ny fanovana sasany. Ny sasany amin'ireo vokatra iombonana iraisana dia ahitana;
Tsy misy olona te hanao ny ratsy eo am-pandriana, indrindra raha efa nanao izany tsara ianao. Na dia iray amin'ny tombontsoa Nolvadex aza dia mampitombo ny halavan'ny testosterone, afaka manampy amin'ny fampihenana ny fiara fitondra-tena koa izy. Ny fandinihana natao dia nampiseho fa ny sasany tamin'ireo mpampiasa Nolvadex dia mitaraina noho ny ambany libido, raha ny hafa kosa dia lasa tsy misy izany.
Ny fahaverezana ny volo dia mety ho fanaintainana. Indrisy anefa fa fisehoan-javatra tsy tapaka amin'ny fampiasana ny Nolvadex.
Hibaliaka eo amin'ny tanana, kitrokely, ary tongotra
Ireto ny voka-dratsin'ny Nolvadex izay mila fitsaboana avy hatrany;
Fiovana eo amin'ny fahitana anao
Mahatsapa kivy (tsy afaka manao ny asanao andavanandro araka ny tokony ho izy)
Ny moka (ny tsy fahafahana mihinana na mahatsiaro ho maivamaivana na dia efa nahitana fanafody prescription aza)
Ny tsiranoka amin'ny vaginara dia mitarika ny tsy fahazoana, ny fanaintainana ary ny tsy fanarahan-dàlana
Ny fikisihana, ny fanaintainana na ny moka amin'ny tongotra na ny sandry, fa tsy ny iray hafa
Olona maro no tsy mahita ny gnecomastia na ny olona miondrika henjana, saingy amin'ny heviny marina izany. Io no fampiroboroboana ny rongony amin'ny lahy. Amin'ny ankapobeny dia vokatry ny fiovan'ny hormones iray noho ny antony toy ny taona na fampiasana steroid.
Amin'io tranga io, ny fitomboan'ny estrogen / testosterone dia mety ho antony lehibe indrindra. Ary koa, ny fampitomboana estrogenic na fivoahana androgenic fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fifindran'ny estrogen na androgen dia mety ny antony.
Ny lehilahy mijaly amin'izany dia tsy mahita ny fiovan'ny tarehiny, fa mety hiteraka fahasimbana ara-tsaina ihany koa. Ankoatra ny fahaverezan'ny fahatokisan-tenany, dia mety ho kivy ny olona te hamita-tena. Na dia ratsy kokoa aza, dia mety ho sarotra ny manafina azy ireo toy izany ka handehanana akanjo marevaka ary misoroka asa izay mety hampipoitra ny vatany, izany hoe ny milomano.
Amin'izao fotoana izao, maro ireo lehilahy manana izany toe-javatra izany dia mijery foana ny vahaolana maharitra. Ny zavatra tsara dia, iray amin'ny Nolvadex dia mampihena ny nono ny tetezany tsy misy dikany ny tsy fahombiazany. Noho izany, Nolvadex dia manolotra safidy azo antoka sy mahomby amin'ny fitsaboana ny tranga sasany amin'ny gynecomastia.
Ampitomboy ny hatavezina
Tsy dia sarotra loatra ny manao ny volavolan-dalàna. Ny zavatra rehetra angatahana aminao dia ny hanandratra ny vatomizana, hiara-misakafo tsara, ary handray ny fanafody fanabeazana tsara indrindra. Nanontany tena ve ianao hoe inona no azonao atao raha hitanao ny lembalemba? Inona no vokatra azonao ampiasaina raha mila mipoitra ianao? Ahoana no hanatsaranao ny fitomboan'ny hozatrao?
Ny iray amin'ny fampiasana ny Nolvadex dia ny hampitombo ny testosterone ao amin'ny vatana dia mahatonga azy ho safidy tsara raha te hampitombo be ny volanao. Manao izany amin'ny alàlan'ny fihetsika hypothalamus sy ny andrin-jiolahy ao amin'ny atidoha. Izany dia mitarika amin'ny fampiroboroboana ny vokatra Hormone Follicle (FSH) sy ny hormone Luteinizing (LH), izay manandratra ny famokarana Testosterone amin'ny fitsapana.
Raha statistika, raha misy olona mandray 20mg Nolvadex mandritra ny folo andro, dia mety hitombo amin'ny 41% ny tahan'ny testosterone amin'ny ran'izy ireo. Raha ampiasaina mandritra ny enina herinandro, dia mety hihoatra ny 84% ny tahan'ny testosterone.
Testosterone dia hormonina izay vokatra azo avy amin'ny vatany. Izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny fampiasana proteinina hozatra, ankoatra ny andraikitra hafa. Maro ny antony mety mahatonga ny famokarana testosterone. Raha te hanohitra izany dia azonao ampiasaina ny Nolvadex hampitombo ny famokarana testosterone.
Ny Nolvadex dia iray amin'ireo SERM tsy mampidi-doza, noho izany dia mampiseho ny fiantraikan'ny Estrogenic mpanohitra sy ny fiantraikan'ny agonista ao amin'ny vatana. Midika izany fa amin'ny faritra sasany dia mety hitarika amin'ny fiantraikany eo amin'ny estrogenic, raha ny sasany, mety hitarika amin'ny fiantraikany amin'ny fiarovan-tena. Ny iray amin'ireo vokatra ireo dia ny fitomboan'ny famokarana testosterone. Mampihena ny vokatry ny estrogen ao amin'ny vatana koa izany.
Noho izany antony izany dia heverina ho singa iray tena ilaina i Nolvadex raha te-hanaraka fitsaboana amin'ny fitsaboana ianao. Izany dia satria rehefa avy nanao famandrihan'ny kanseran'ny anabolika izy ireo dia afaka manova azy ho estrogen. Vokatr'izany, afaka mahazo tombony ny olona iray, midika izany fa mandany ny fandrosoanao. Amin'ny fihanaky ny estrogen, ny vokatra hafa dia voatazona amin'ny ala. Ny haavon'ny testosterone dia mety hiverina amin'ny ara-dalàna noho ny fampiasana ny Nolvadex.
Amin'ny ankapobeny, ny Nolvadex dia mitantana avy hatrany rehefa avy amin'ny vatan'ny olona ny steroids anabolic rehetra. Tokony haka 20-40mg isan'andro mandritra ny efatra ka hatramin'ny enina herinandro. Ny avo lenta mihoatra noho izany dia tsy manome vokatra lehibe hafa.
Ao amin'ny PCT, ny Nolvadex dia miara-miasa miaraka amina testosterone iray na roa farafahakeliny, toy ny aromatase, toy ny HCG na Aromasin. Ny tombony amin'ny fampiasana azy ireo dia ny fanatsarana ny vokatra sy hampiroboroboana ny asa HPTA.
Ny fampiasana ny Nolvadex mandritra ny famantaranandro iray dia tokony hialana amin'izany raha tadiavinao ny fanoherana ny fanafoanana ny testosterone satria mety tsy mety miasa izany. Mety midika izany fa ny volanao dia hidina ny fisotroana.
Tsy toy ny taona maromaro lasa izay, ny fahaverezan'ny lanjany dia heverina ho toy ny iray amin'ny tapakila hitady tsara. Ankoatra ny fihodinan'ny nify, ny fahaverezan'ny lanja dia mety midika fa te ho salama kokoa ianao. Ny fijerena ireo kalôria fanampiny dia tsy resaka mora akory. Ny iray amin'ireo fomba ahafahanao mahomby amin'ny lanjan'ny fahaverezanao dia ny fampiasana an'i Nolvadex.
Fianarana natao Ny valin'ny Nolvadex amin'ny fahavoazan'ny lanjany dia mampiseho fa mahomby amin'ny ankamaroan'ny fananana izy mandray anjara amin'ny fitantanana ny lanjany. Amin'ny ankapobeny, i Nolvadex dia nanaporofo fa afaka manampy ny vatana handoro siramamy bebe kokoa rehefa manomboka ny metabolism. Izany dia mitarika amin'ny lipolytika manatsara kokoa noho izany ny fitomboan'ny fandoroana ny tavy.
Miaraka amin'ny Clenbuterol, mety hitarika ho amin'ny fihenan'ny lipase proteinina izy io, izay zava-doza manan-danja amin'ny metabolisman'ny triglyceride. Samy afaka manao fanafody izy ireny. Ankoatra izany, Ny Nolvadex dia fantatra amin'ny fampitomboana ny fahaiza-manaon'ny vatana mba handorana ny matavy ary koa mitaona ny haavon'ny angovo izay ilaina amin'ny dingan'ny fandoroana tavy.
Manamafy ny fiasan'ny rafitra hery fiarovana izy io
Rehefa miresaka momba ny hery fiarovan'ny vatana isika dia miresaka momba ny fahafahana miady amin'ny aretina sy ny aretina. Ho an'ny maro, ny Nolvadex dia manana fiantraikany tsara amin'ny rafitra fiarovan'ny olona.
8. Nolvadex fanamarihana
Hoy i Alexandra M., "Efa niasa nandritra ireo enim-bolana farany aho ary tsy niova araka izay niheverako azy ny fiovana. Nanomboka nitady zavatra izay hanatsara ny voloko aho ary nanolo-tena ho an'i Nolvadex. Mahavariana ny valiny Nolvadex. Vao mainka nihomehy ny masoko, ary tsapako fa tokony hisaotra io vokatra io. Midera azy amin'ny olona mitady hibanjina lehibe kokoa aho. "
Ny fitsaboana tsara indrindra
Hoy i Priscilla K, "Taorian'ny fikarohana maro, dia hitako fa ny tombotsoan'ny Nolvadex dia ny fahavoazana mavesatra. Tsy afaka niandry aho hanandrana izany, ary avy hatrany dia nandidy izany aho; Nahazo ny entako tamin'ny andro iray aho. Hatramin'izao dia very kilao folo aho, ary mbola tsy sambatra aho hatramin'izao. Efa lasa fidiram-bola mahazatra ahy izao, ary maniry hanandrana izany koa ny namako sy ny fianakaviako. Tsy voan'ny aretina hafa amin'ny Nolvadex aho hatramin'izao, tsy toy ny inona no nandehanako tamin'ny fampiasana zava-mahadomelina hafa. Raha te handratra ny volanao marary tsy misy atidoha ianao ary ny fo dia tokony hijaly, dia ny Nolvadex no tokony handeha. "
Niteny i Leila Wagner hoe, "Noraisiko ny fahagagako Nolvadex tamin'ny herinandro lasa. Inona no fahagagana mety hitranga? Taorian'ny fiezahana hitadiavana ny folo taona farany tsy niraikirako, dia nizaha toetra tsara aho tamin'ny fanampian'i Nolvadex, ary ankehitriny dia mihazona ny fifaliako amam-piravoravoana aho. Tsy azoko antoka raha afaka mitazona izany amin'ny teny frantsay aho, ary faly aho fa nataoko tamin'ny farany. Mbola tsy mino aho, ary niantso ny fahagagana kely aho. Izay rehetra nanandrana hitoe-jaza dia tokony hanome an'i Nolvadex ezaka. "
Medication PCT tsara indrindra
Hoy i Cassie Houston: "Nandidy ity vokatra ity ho an'ny vadiko aho satria nanomboka niorina ny totozy noho ny fampiasana steroids. Nisy fiantraikany lehibe taminy ny nahatonga azy ho niala sasatra noho ny henatra. Lasa ambany koa ny libido, ary tsy tiany intsony ny miaraka. Rehefa avy eo amin'ity vokatra ity izy, dia nilaza izy fa mahagaga ny vokatra Nolvadex. Efa naverina ny zava-drehetra, ary niverina tamin'ny ara-dalàna izy. Tena mihena ny boobs, ary miverina miasa izy. Ny libido dia avo be koa ankehitriny. Mino aho fa ity no PCT tsara indrindra izay hanome baiko ny Testosterone anao. "
Azonao atao Buy Nolvadex powder toy ny zava-mahadomelina PCT na hiadiana amin'ny tsy fahampian-tsakafo. Azonao atao koa ny manenjika ny hozatra lehibe kokoa, na te hahazo lanja sy haingana kokoa. Ny fanontaniana lehibe dia hoe aiza no azonao hidirana azy?
Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra izay anontanian'ny olona dia ny toerana ahafahany mividy ny vovo-dronono Nolvadex. Tsy hoe mividy izany fotsiny fa mahazo ny iray izay tsara sy tsara. Raha heverinao fa misy lalana maro an-tserasera azonao azonao, dia mety tsy azonao antoka hoe iza no manome an'i Nolvadex izay azo antoka.
Mba hahazoana antoka fa mividy ny zavatra tsara ianao dia afaka mividy Nolvadex for sale avy aminay. Azonao atao ihany koa ny mividy an'i Nolvadex amin'ny ampahany amin'ny vidiny ara-drariny raha mikasa izany ny fikasanao. Ny zavatra tsara dia miaraka amin'ny Nolvadex antsika, tsy misy fomba ahafahana manadalana ny alika na ny poizina avy amin'izany; Tena Nolvadex.
10. Ny Nolvadex dia mitondra ny tsy fahampian'ny vehivavy
Manan-java-manahirana sy mitebiteby? You are not alone. Ny antontan'isa dia maneho fa manodidina ny 7% ny vehivavy manambady dia manana olana manahirana manerantany. Tsy midika anefa izany fa raha manana olana izy dia tsy hanana fotoana hitazonana ny zanany.
Ny iray amin'ireo olana lehibe izay mitondra anjara amin'ny tsy fahampian-tsakafo dia ny olana amin'ny ovulation. Mety ho vokatry ny aretina polyarystika izy ireo, izay miharihary amin'ny tsy fahasalamana hormona izay manelingelina ny fisotron-dronono. Ny vaovao tsara dia misy fanafody na tsindrona fanafody izay manampy amin'ny famokarana atody raha efa nahatsapa fahasahiranana izy ireo. Noho izany, izy ireo dia mampitombo ny fahombiazan'ny ovulation.
Amin'ny alalan'izany dia afaka manao ny fotoana tokony hanatsarana ny fahafaha-mitondra vohoka. Iray amin'ny Totoxifen Citrate poids Ny tombontsoa dia ny nanamafisana ny fisian'ny ovulation tanteraka. Ankoatra izany, dia manentana ny atody mba hamokarana atody maro raha mamokatra iray. Ny tombony amin'izany dia ny fampiasana azy dia tsy mora sy mampidi-doza toy ny fampiasana gonadotropine (fanafody fitsaboana).
Ny Clomid dia latsaka ao amin'ny kilasy mitovy amin'ny Nolvadex, ary samy ampiasaina amin'ny fikarakarana ny aretina amin'ny ovulatory amin'ny vehivavy tsy mahazatra. Miasa toy izany koa izy ireo ary efa voaporofo fa manampy amin'ny fampiroboroboana ny fambolena amin'ny 65-75% ny vehivavy. Clomid, anefa, dia misy fiantraikany hafa toy ny fanesorana ny fanatavezan-tsigara izay tsy afaka mahatsiaro. Etsy ankilany, tsy nisy tatitra natao momba ny fiantraikan'ny Nolvadex momba ny tranonjaza.